पर्यटन तथा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय एक व्यवसायीको अनुभव-Setoghar
पर्यटन तथा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय एक व्यवसायीको अनुभव
आफैँमा विकट जिल्लाको रुपमा चिनिने सोलुखुम्बुमा पर्यटन क्षेत्र नै अधिकांश मानिसहरुको आयस्रोतको आधार बनेको छ । यस जिल्लाको विकासको निम्ति पर्यटन क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ । विकट जिल्लाको रुपमा चिनिने सोलुखुम्बुको प्रमुख आयस्रोत र जीवीकोपार्जनको आधार नै पर्यटन हो ।
त्यही सोलुखुम्बु जिल्लामा नै जन्मिएका तामाङ डेस्टिनेसन नेपालका निमा पाख्रिन र टेक बहादुर तामाङको सहयोगको कारण पर्यटनको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पर्यटन व्यवसायी हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर काम गर्न चाहने तामाङलाई अहिले पर्यटन व्यवसायीको रुपमा चिनिन आइपुग्नुमा परिवार तथा समुदायको नै सहयोग रहेको छ ।
पर्यटनको क्षेत्रमा कसरी लागे तामाङ–ः
तामाङ भन्छन्, ‘मेरो जन्म पनि पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको तर पर्यटन क्षेत्र फस्टाउन नसकेको सोलुखुम्बुको केरुङ गाविसमा भयो । वास्तवमा म जन्मेको सो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा त उक्त क्षेत्रलाई चिनिँदैन । तैपनि हाम्रा बुबा हजुरबुबाहरु पनि पर्यटनको क्षेत्रमा नै काम गरेर जीवीकोपार्जन गर्दै आउनुभएको थियो । ऊहाँहरुको कसरी यस क्षेत्रमा प्रवेश भयो ? त्यस क्षेत्रमा किन पर्यटन क्षेत्र फस्टाउन सकेन ? भन्ने कुरा भने हामीलाई जानकारी थिएन । बुबा र दाई पर्यटनको क्षेत्रमा रही टे«किङ्ग काम गर्दा मलाई यो क्षेत्र निकै नै रमाइलो क्षेत्रको रुपमा रहेको अनुभव हुन्थ्यो । विस्तारै बुबा र दाईको साथले गर्दा म पनि पर्यटनको क्षेत्रमा नै आइपुग्न सफल भएँ . त्यस समयमा मलाइ लाग्थ्यो, पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने हो भने नेपालमा सहज रुपमा पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ । पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने नेपालमा विदेशबाट आउने पर्यटकहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । यसले गर्दा विदेशमा जान पनि सजिलो हुन्छ । म यसै सोच बमोजिम नै पर्यटनको क्षेत्रमा संलग्न भएको हुँ ।’
सानै उमेरमा नै आमा बित्नुभएको हुनाले घरायसी कामको जिम्मेवारी पनि बुद्ध सिंह तामाङ माथि नै थपियो । त्यसले गर्दा माथिल्लो तहको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेका तामाङ आर्थिक अवस्थालाई जेनतेन निर्वाह गर्नेमा नै लागिरहे । आर्थिक व्यवस्थापनको निम्ति १५÷१६ बर्षको उमेरमा नै घर छोडे । त्यस पश्चात् उनी टे«किङ्ग क्षेत्रमा नै संलग्न रहँदै आएका छन् ।
पर्यटनको क्षेत्रमा आवद्ध हुनुको निम्ति अदक्ष मानिसको प्रवेश बिन्दु भनेको भरिया नै हो । आफुले पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा भोगेको अनुभव सुनाउँदै तामाङ भन्छन्, ‘मैले पनि यस क्षेत्रमा शुरुका दिनमा भरियाको रुपबाट करियर शुरु गरेको हुँ । मैले काम गर्दै जाने क्रममा शुरुका दिनमा आफ्नो क्षमता भन्दा बढी तौलका सामानहरु पनि बोक्नु पथ्र्यो । यद्यपि मैले यस्ता अनेकौं सङ्घर्ष सहेर लामो समय यसै क्षेत्रमा नै रहेर काम गरेँ । यस सँगै असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट कुक, असिस्टेन्ट गाइड हुँदै आफुलाई कामबाट अनुभवी पनि बनाउँदै थिएँ । त्यसै क्रममा काठमाडौँमा रहेको भाषा परिक्षण प्रदायक संस्थाबाट अङ्ग्रेजी भाषा सिक्ने काम पनि गरेँ ।
शुरुका दिनमा उनले काम गरेको कम्पनी डेस्टिनेसन नेपाल टे«किङ हो । उनले शुरुको समयमा काम गर्दा १५ सयमा काम शुरु गरेका थिए । तथापी पनि उनलाई यसै कम्पनीमा रहेर काम गर्ने क्रममा नै पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रो तवरले बुझ्ने अवसर मिल्यो ।
आफुले काम शुरु गरेको समय र अहिलेको तुलना गर्दै तामाङ भन्छन्, ‘पर्यटन व्यवसायमा अहिले र पहिलेमा निकै नै फरक छ । त्यस समयमा नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा अहिलेको जस्तो अनलाइनमा आधारित भएर काम गर्न सकिने अवस्था नभएको कारणले कुनै टिकट लिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीमा नै पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । यद्यपि शुरुका ती दिनमा आफू अलराउन्डरको रुपमा नै काम गरेको कारणले गर्दा नै अहिले आफैंले कम्पनी सञ्चाालन गर्न सहज भएको हो, तामाङ्ग भन्छन् ।
आफूले माथिल्लो तहको शिक्षाबाट बञ्चित भएको कुरा तामाङको मनमा गडेर बसेको रहेछ, ‘म जस्ता अन्य थुप्रै मानिसले शिक्षा लिन नपाएको कुरा झल्झल्ती याद आउँथ्यो । यसैकारणले गर्दा मैले गाऊँमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा निकै दृढ थिएँ । जसरी पनि गाउँमा शिक्षा पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुराको हामी सबैले महसुस गरेका हुनाले एकजना साथीको सहयोगमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय सञ्चालनको निम्ति अनुमति लियौं । साना नानीहरुलाई उक्त विद्यालयमा नै पढाउन शुरु ग¥यौं । तर त्यस समयमा विद्यालयको अवस्था निकै नै कमजोर थियो’ तामाङको अनुभव हो यो ।
बुद्ध सिंह तामाङको बुझाईमा पर्यटन क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी तथा विकृति र यसलाई राम्रो तवरले अघी बढाउन गर्नुपर्ने कार्य सम्बन्धी सामाग्रीहरु अर्को खण्डमा पनि प्रकासन गरिएकाे छ ।
तामाङ एर्गोस ट्रेकिंग नेपालका संचालक हुन्
अर्थतन्त्रको महाउत्सव : ग्रामीण अर्थतन्त्रको कोशेढुंगा दसैं
महिला हिंसाविरुद्ध अझै चेतना जरुरी